GoAnimate wuxuu ku darayaa shirkad, sabuurad, iyo astaamaha muuqaalka muuqaalka | Martech Zone
Khamiis, Juun 19, 2014 Khamiis, Juun 19, 2014 Douglas Karr
Suuqyayaashu waxay ogaadeen in fiidiyowyadu u oggolaanayaan isku xirnaanta shucuurta iyo sharraxaadda fiidiyowyada ah 30 ilbiriqsi illaa 2 daqiiqo ka yar waa hab cajiib ah oo lagu kasbado feejignaan iyo hagaajinta heerarka beddelka. Kaliya todobaadkii hore, jaalle Andrew xagal istaagay xafiiskayaga wuxuuna noo sheegay sida uu ugu riyaaqay la shaqaynta Goanimate iyo inuu adeegi karo iyo in kale.
Dhowr maalmood ka dib, waxaan arkayay bannaanbax toos ah (oo ka socda COO Gary Lipkowitz) animation-ka cusub ee GoAnimate iyo mowduucyada muuqaalka muuqaalka ee fiidiyowga ah ee lagu daray barxadda abuurista fiidiyeyaasha sharraxa iyo sawiro sawiran.
Haddii aad waligaa isticmaashay qalab tafatirka fiidiyowga ama Flash, isku-xirnaanta adeegsadaha ee GoAnimate waa mid aad u adag, oo kaliya kumanaan xarfaan, muuqaallo, ficillo iyo xulashooyin badan Halkii aad wax ka qori lahayd oo aad ka sii daa lahayd, aan u ogolaanno fiidiyowgu inuu sharaxo.
Fiidiyowyada Muuqaalka ah ee 'GoAnimate Animated Infographic Videos'
Kani waa fiidiyow 2 daqiiqo ah oo ka socda GoAnimate on soosaarida fiidiyow muuqaal ah:
Halkan waa a Goanimate fiidiyaha macluumaadka in kabadan hal daqiiqo oo dheer oo uu abuuray mid kamid ah isticmaaleyaasha GoAnimate:
Fiidiyeyaasha Sharaxa Sawir-gacmeedka GoAnimate
Oo waa kan Goanimate muuqaal animation muuqaal ah oo uu abuuray adeegsade Bangiga Dhexe ee Koonfur Afrika:
Hadaad jeceshahay inaad bilowdo Goanimate, Waxaan kugula talin lahaa ururinta shaqooyinka maqaalada, sawirada iyo fiidiyowyada in GoAnimate ay horumarineysay si ay uga caawiso dadka isticmaala inay sheekadooda dhulka ka baxaan.
GoAnimate Enterprise, Kooxda iyo Astaamaha Wadashaqeynta
Hadda Goanimate waxay ku balaadhisay qalabkeeda qalab GoTeam si aad u siiso qol shirkadeed oo aad ku marti qaadi karto wada-hawlgalayaasha iyo dib-u-eegeyaasha, wadaagaan qoraallada jadwalka, isla markaana uga shaqeeyaan fiidiyowyada koox ahaan!
Waxa ugu fiican, Goanimate wuxuu sii wadaa inuu ku daro tan animations cusub uruurintiisa isticmaaleyaasha usbuuc walba. Xitaa waxay dhageystaan ​​codsiyada uga yimaada beeshooda.
Tags: xagal andrewfiidiyo muuqaal lehiskaashi video animatedfiidiyeyaasha sharraxaGary Lipkowitzgoanimatefiidiyowyo infographic ahfiidiyowga fiidiyowgafiidiyowyo sabuurad ah
Fikraddaada Maaddooyinka Astaantan leh ma shaqeyn doontaa? 5 Dariiqo oo lagu Ogaado